Sports - Garsoor.net - Garsoor is the most trusted online media in Somalia
DEG DEG: Xulka Difaacanaya koobka Adduunka oo laga reebay tartanka
Xulka Jarmalka oo ah midka difaacanaya koobka adduunka ayaa caawa isaga haray tartanka kadib guuldarro weyn oo ka so gaartay xulka Koonfurta Kuuriya. Ciyaartii caawa waxaa 2-0 ay guusha Ku raacday xulka Koonfurta Kuuriya. Jarmalka ayaa noqonaya xulkii seddexaad ee heerkan Ku haraya isaga oo koobka difaacanaya waxaana ka horeeyay Talyaaniga iyo Isbeen. Waa markii ugu horreysay...
EL Calisco: Ciyaarta ugu Daawashada Badan dunid oo Goordhow la Ciyaari Doono
Dunida oo Dhan ayaa waxa ay isha ku hayaan ciyaarta ugu xiisaha iyo xamaasada badan ee dunida ee loo yaqaano El Clasico. Waa Ciyaarta u dhaxeeya Real Madirid iyo Barcelona oo ah mida ugu daawashada badan dunidan. Labadaan koox oo kawada ciyaaraha horyaalka La Liga ah ee dalka Spain ayaa ah kuwa aad u xifaaltama taasi oo sii kordhineeysa xiisaha Ciyaarahaan. Real Madrid...
Jubbaland oo 2-0 ku garaacday kooxda Koonfur Galbeed
Kooxda maamulka Jubbaland ayaa galabta 2-0 ku garaacday dhigooda Koonfur Galbeed kulanka afar dhamaadka koobka dowlad goboleedyada. Jubbaland ayaa finalka koobkan la ciyaari doonta xulka Puntland maalinta Jimcaha ee toddobadkan. Xulka Puntland ayaa sanadkii hore rigoorayaal kaga qaaday koobkan xulka Jubbaland. Garsoor kala soco faahfaahinta ciyaarahan. ...
Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo maanta ku balansan afar dhamaadka koobka maamul goboleedyada
Xulalka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa maanta ku balansan afar dhamaadka koobka maamul goboleedyada oo galabta ka dhacaya garoonka Konis ee magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa soo geli doonna saacada geeska Afrika marka ay tahay 3:00 PM galabnimo. Kooxdii galabta soo gudubtay waxay finalka la ciyaari doonan kooxda Puntland oo shalay 0-1 ku garaacday kooxda gobolka Banaadir. Garsoor...
Xulka Puntland oo garaacay kooxda Banaadir si ay u gaaran finalka koobka Maamul Goboleedyada
Xulka kubadda cagta ee Puntland ayaa galabta 0-1 ku garaacay ciyaaryahanada kooxda gobolka Banaadir ciyaartii afar dhamaadka koobka maamul goboleedyada. Puntland ayaa ciyaarta finalka la ciyaari doonta maalinta Jimcha midkood xulalka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo berito isku arkaya garoonka Koonis. Banaadir oo la filayay iney sanadkan dar dar xoogan ku socotay waxaa...
FALAN QEYN: Ciyaartooyda Jubbaland iyo Gal-Mudug oo Ciyaar Xiiso Badan ku Dhexmari Doonto Koonis
Waxaa galabta abaaro 3:30 Xiliga Muqdisho lagu wadaa in garoonka Koonis Degmada Cabdi Casiis ee Gobolka Banaadir in ay ka dhacdo ciyaar xiiso badan oo u dhaxeeyso Ciyaartooyda Jubbaland iyo Gal-Mudug. Ciyaartaan oo ah mid Xiiso badan Ayaa Haddii Gal-mudug laga badiyaa ama xitaa Bar Baro lagaliyaa waxa ay ka hareeysaa Tartanka Maamul Goboleedyada. Dhanka kale Kooxda Jubbaland...
Neymar oo tijaabadda Caafimaad ku maray Magaaladda Porto iyo PSG oo saacadaha ……….
Neymar ayaa tijaabada caafimaad ee Paris Saint-Germain ku mari doona dalka Portugal, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka France. Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa haatan ku sugan Magaaladda Porto waxaana saacadaha soo aadan ee maanta uu si rasmi ah u gaari doonaa magaaladda Paris ee dalka France. Weeraryahankan ayaa dhawaan saaxiibadiisa Barcelona ku wargaliyay...
Mbappe oo ku wargeliyay Monaco iney iska iibiyaan
Weeararyahanka Monaco Kylian Mbappe ayaa ku wargeliyay kooxdisa in uu doonayo in xagaagan la iska iibiyo, sida ay baahisay majaladda reer France ee L’Equipe. Da’yarka reer France ayaa dooqa koowaad u ah kooxo dhowr ah oo ka dhisan qaaradda Yurub waxaase Monaco ay ku fikireysa in ay sare u qaado lacagaha lagu ibinayo ciyaaryahankaasi kadib markii la shaaciyay...
Wasiirka Ciyaahara iyo Dhalinyaradda oo u hambalyeysay kooxda Dekedda
Munaasabad abaal marino lagu guddoon siinayey kooxaha kaalmaha hore ka galay horyaalka heerka koobaad ee kubadda cagta Dalka ayaa waxaa ka qeyb galay Ra’isal wasaare ku-xigeenka dalka, Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka dekedaha, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, guddoomiyeyayaasha, xiriirada kale ee ciyaaraha iyo masuuliyiin...
Neymar oo heshiis 5 sanno ah ugu biiray PSG
Laacibkii kooxda Barcelona ee Neymar ayaa ugu biiray kooxda PSG heshiis 5 sanno ah. Heshiiska Neymar waxa ku baxday lacag dhan 450 milyan oo pound,sida uu ogaaday telefishinka SKY sport. Laacibkan reer Brazil ayaa u safri doona magaalada Paris labada cisho ee soo socota. ...
Hijab is my right - 1552 views